HUAWEI Y5 2019, Faux-Leather Design, Best Budget 32GB Storage | HUAWEI Myanmar
5.71” Dewdrop မျက်နှာပြင်
HUAWEI Y5 2019 ရဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံက သဘာဝတရားကြီးကို အခြေခံထားတဲ့ 5.71 လက်မအရွယ် Dewdrop မျက်နှာပြင်နဲ့ပါ။¹ဒီ လှပသေသပ်တဲ့ မျက်နှာပြင်က 84.6% ကိုယ်ထည်အချိုး²ရှိလို့ ပိုပြီးကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်မှာ ပျော်ရွှင်စရာတွေခံစားရုံပဲမဟုတ်လား။
HUAWEI Y5 2019 ရဲ့ Leather ဒီဇိုင်းပုံစံက ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ရာမှာ ပိုပြီးအထာကျစေပါတယ်။ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကြောင့် သေသပ်မှု၊ ထူးခြားမှုတို့ကို ခံစားစေရမှာဖြစ်သလို Leather ပုံစံအသေးစိတ်ပုံဖော်ထားမှုကလည်း အလှတရားကိုပိုမိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။ ဒီ ဒီဇိုင်းပုံစံက လက်ရာမထင်စေသလို၊ အပေအတေလည်းခံစေတာကြောင့် စိတ်ပူစရာမရှိဘဲ အေးဆေးသုံးလို့ရပြီပေါ့။ (Leather ဒီဇိုင်းပုံစံကို အညိုရောင်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်)
f/1.8 ရှိတဲ့ 13 MP ကင်မရာကြောင့် ဓာတ်ပုံတွေရဲ့ အလင်းရောင်ပိုင်းကို 50% ပိုမိုရရှိစေပါတယ်။³ အခိုက်အတန့်တိုင်းကို ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ တိတိကျကျဖမ်းယူလိုက်ပါ။
HUAWEI Y5 2019 နဲ့ အမိုက်စားဆယ်လ်ဖီတွေ ရိုက်ကူးလိုက်ပါ။ 5PM ကင်မရာကိုမှ Selfie Toning Flash ပါဝင်တာကြောင့် အကောင်းဆုံးပုံရိပ်တွေကို ရရှိစေမှာပါ။ ဒါ့အပြင် Smart Beauty Feature ကြောင့် သဘာဝကျတဲ့အလှတရားတွေကို ရရှိစေဦးမှာပါ။
32 GB ROM⁴ ပမာဏပါဝင်တာကြောင့် သီချင်းတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ App တွေကို အားရပါးရသိမ်းဆည်းနိုင်ပါပြီ။
3020 mAh ပါဝင်တဲ့ကြီးမားတဲ့ ဘက်ထရီနှင့် အသိဥာဏ်မြင့် ပါဝါသိမ်းဆည်းမှု နည်းပညာကြောင့် ဂိမ်းဆော့တာတွေ၊ မီဒီယာပိုင်းတွေအတွက် ပိုပြီးအချိန်ရလာပြီပေါ့။ HUAWEI Y5 2019 က ၁၆ နာရီနီးပါး ဗီဒီယိုကြည့်ချိန်၊ ၇၄ နာရီနီးပါး သီချင်းနားထောင်ချိန်နဲ့ ၁၀ နာရီနီးပါး အင်တာနက်အသုံးပြုချိန်တို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။⁵.
HUAWEI Y5 2019 က မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ အချက်အလက်ပေါင်း ၁၀၂၄ ခုအထိ အသိဥာဏ်ရှိရှိမှတ်သားပေးတာကြောင့် ဖုန်းကိုပင့်ယူလိုက်တာနဲ့ မျက်နှာကိုလျင်လျင်မြန်မြန် မှတ်မိစေပြီး အလင်းရောင်နည်းပါးနေရင်တောင် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း လွယ်လွယ်ကူကူ Unlock လုပ်နိုင်မှာပါ။
EMUI 9.0 နဲ့ Android9တို့ရဲ့ ပေါင်းစပ်မှုက လျင်မြန်ချောမွေ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ရရှိစေမှာပါ။ ဒါ့အပြင် HUAWEI Y5 2019 က 12 nm Chipset ကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် အရင်မျိုးဆက်တွေထက် ပါဝါစားသက်သာစေသလို ပိုပြီးစမတ်ကျစေမှာပါ။
ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက် Party Mode နဲ့ဆို အရာရာအဆင်ပြေပြီပေါ့။ ဒီ Feature က မတူညီတဲ့ Huawei ဖုန်းတွေကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး သီချင်းတစ်ပုဒ်တည်းကို ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
Dual SIM နဲ့ဆို ပိ
Dual SIM⁶ နဲ့ 512 GB အထိ⁷Micro SD Card တစ်ချိန်တည်း ထည့်သွင်းနိုင်မယ့် three-card slot ဒီဇိုင်းကြောင့် အဆင်ပြေစေပြီပေါ့။ Dual 4G နဲ့ Dual VoLTE⁸ တစ်ချိန်တည်းသုံးနိုင်တဲ့ အားသာချက်နဲ့အတူ လျင်မြန်ချောမွေ့တဲ့ လိုင်းဆွဲအားကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။
စာဖတ်တဲ့အခါမှာ သက်သက်သာသာနဲ့အဆင်ပြေစေဖို့ HUAWEI Y5 2019 က Eye Comfort Mode နဲ့အတူ သင့်ရဲ့မျက်လုံးကို ဂရုစိုက်ပေးပါတယ်။ ဒီမျက်နှာပြင်ကိုတော့ TÜV Rheinland က ထောက်ခံပေးထားပြီး မျက်စိထိခိုက်စေမယ့် အပြာရောင်အလင်းတန်းတွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
1. HUAWEI Dewdrop မျက်နှာပြင်ဆိုသည်မှာ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အနားသတ်နှင့် ကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်အချိုး၊ သေးငယ်သည့် notch ပုံစံမျက်နှာပြင်ကို ဆိုလိုပါသည်။
2. မျက်နှာပြင်ပမာဏသည် ပုံမှန်တိုင်းတာချက်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်-ကိုယ်ထည်အချိုးတွက်ချက်ပုံ - AA area / front TP area
3. ပုံမှန်စမတ်ဖုန်းများတွင် ပါဝင်သော f/2.2 aperture ကို နှိုင်းယှဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
4. HUAWEI Y5 2019 တွင် ROM ပမာဏကွဲပြားသော Model အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ တင်သွင်းသောနိုင်ငံပေါ်မူတည်၍ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။
5. ပုံသေပမာဏဖြစ်သည်။ ပါဝါကုန်ဆုံးခြင်းရလဒ်များကို HUAWEI ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ရရှိခြင်ဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်ပမာဏသည် ပတ်ဝန်းကျင်းအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
6. HUAWEI Y5 2019 တွင် Single card, Dual-Sim ဆိုပြီး မတူညီသော Model အမျိုးမျိုးရှိသည်။ တင်သွင်းသောနိုင်ငံပေါ်မူတည်၍ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။
7. Micro SD ကဒ်ကို သီးသန့်ရောင်းချသည်။
8. VoLTE စနစ်သည် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ၏ အထောက်အပံ့ပေါ်မူတည်သည်။